Organizationtù Ụlọ Akwụkwọ
Ụlọ akwụkwọ ahụ na -ahụ maka ụmụ akwụkwọ site na afọ 4 - 11 bụ ndị na -agụ akwụkwọ na mmalite afọ, isi ihe nke mbụ na ọkwa nke abụọ nke usoro ọmụmụ mba. Enwere klaasị iri na asatọ nwere ụmụ akwụkwọ nwere ikike dị iche iche. Nhazi klaasị dabere na ọnụọgụ otu afọ.
Iji nabata ọnụọgụ ụmụaka na -etinye akwụkwọ na Wentworth na ọkwa abụọ, anyị na -ahazi klasị anyị ka ụfọdụ bụrụ afọ agwakọta.
N'ịgbasa mgbasawanye anyị, nọmba ọkọlọtọ na -abanye n'ụlọ akwụkwọ ahụ bụ ụmụ akwụkwọ 90. Anyị nwere kpochapụrụ mkpa maka klaasị nke ọma na ntọala na KS1, ụlọ akwụkwọ ahụ ga -aga n'ihu na -agbasa ruo mgbe otu afọ ọ bụla nwere 3 klas kwụ ọtọ.
N'ọgbọ nke abụọ, ọnụọgụ ụmụ akwụkwọ nọ na klaasị enweghị njedebe. Agbanyeghị, ekwesịrị ịtụle ogo mmụta na mkpa bara uru nke ụlọ ụlọ.
Ebe nhazi otu kwụ ọtọ ka nọ n'afọ nke ise na nke isii, ejiri nlezianya hazie usoro mmụta ahụ iji hụ na enweghị mmegharị.
N'ebe ọ dị mkpa, a ga -edobe otu afọ maka isi isiokwu nke Bekee na Math. Nke a na -enye ndị nkuzi ohere ịchekwa ọkwa mmụta nke ọma maka ụmụaka nwere ike dị iche iche. A na -enyocha ntinye ụmụaka oge niile, a na -edokwa otu dị iche iche dabere na ntule onye nkuzi na arụmọrụ nwata akwụkwọ.
Oge izu ụka maka nkuzi kọntaktị bụ awa 26 na nkeji iri anọ. Ndị ọrụ ga -arụ ọrụ site na 8.45 nke ụtụtụ gaa n'ihu. Ụmụaka kwesịrị ịbịa ụlọ akwụkwọ n'oge. Ụmụaka na -abịaghị n'oge na -akpata ọgba aghara na klaasị.
Enwere ụfọdụ mgbanwe na usoro iheomume a ka anyị na -arụ ọrụ n'okpuru ntuziaka gọọmentị maka ịkụziri ụmụaka n'oge ọrịa Coronavirus.
Mmalite dị nro: Abịa n'etiti 8:40 ụtụtụ - 8:55 ụtụtụ
8:55 ụtụtụ - 12:00 mgbede (KS1)
8:55 ụtụtụ - 12:15 mgbede (KS2)
10:30 ụtụtụ - 10:45 ụtụtụ (KS1 na KS2)
12:00 pm - 12:55 pm (KS1)
12:15 pm - 1:10 pm (KS2)
1:00 pm - 3:15 pm (KS1)
1:10 pm - 3:15 pm (KS2)
2:00 pm - 2:15 pm (KS1)
2:10 pm - 2:25 pm (KS2)